President of Myanmar has appointed U Myint Lwin, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Kingdom of Morocco
The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Myint Lwin, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Arab Republic of Egypt, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Kingdom of Morocco.
Dated. 31 January 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် အီဂျစ်အာရပ်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးမြင့်လွင်အား ၄င်း၏ လက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရားများအပြင် မော်ရိုကိုနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်
U Myint Lwin, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Kingdom of Morocco, presented his copies of Credentials
မော်ရိုကိုဘုရင့်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမြင့်လွင်သည် သံအမတ်ခန့်အပ်လွှာမိတ္တူအား (၂၈-၆-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် မော်ရိုကိုဘုရင့်နိုင်ငံ၊ မြို့တော်ရာဘတ်၌ မော်ရိုကိုနိုင်ငံခြားရေးနှင့် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. Mohammed Ali Lazreqထံ ပေးအပ်ပြီးဖြစ်သည်။
U Myint Lwin, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Kingdom of Morocco, presented his copies of Credentials to H.E. Mr. Mohammed Ali Lazreq, Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Kingdom of Morocco on 28 June 2017, in Rabat.